Umsuka nokufanekisela imbali yempilo - Afrikhepri Fondation
Welcome ISAYENSI NEZIMPILO
LUmdwebo ongcwele we-Flower of Life, lo jeneretha oyinhloko we-geometric wayo yonke impilo, ufundwa ngokujula nangaphezulu kule volumu equkethe ingxenye yesibili ye-workshop edumile kwi-Flower of Life. Ubukhulu bomzimba womuntu, ubukhulu nendawo yezinkanyezi, amaplanethi nezinyanga, kanye nokudalwa kohlobo lomuntu konke kulandelela imvelaphi yazo kulo mfanekiso omuhle nobunkulunkulu. Esebenzisa isibalo sejiyometri esithakazelisayo futhi esinemininingwane eminingi, uDrunvalo Melchizedek usikhombisa ukuthi ukwakheka okubukeka sengathi kulula kweFloss of Life kuqukethe kanjani konke ukuphila kwethu okuyizinhlangothi ezintathu. Kusukela kumaphiramidi nezimfihlakalo zaseGibhithe kuya ezinganeni ze-indigo, uDrunvalo ukhombisa ama-geometri angcwele weqiniso namandla acashile alolonge umhlaba wethu. Nge-labyrinth ephefumulelwe ngokwaphezulu yesayensi nama-anecdotes, ukuqonda kanye nokuqondana kwezinto, kusenza sikhumbule lapho sivela khona, sikhumbule ukuthi siyaphi, futhi simangale ukuthi singobani.
Le Isimpawu seMbali yokuPhila siyabhekwa njengengcwele ngamasiko amaningi emhlabeni jikelele. Ngaphakathi kwalesi Simboli sithola konke ukwakhiwa kwendawo yonke kanye nemizimba kaPlato (i-tetrahedron, i-hexahedron noma i-cube, i-octahedron, i-dodecahedron ne-icosahedron). Uphawu lweMbali Yokuphila (i-Abydos) lakhiwe yimibuthano eyishumi nesishiyagalolunye yokuhlangana ehlanganiswe ngaphakathi komkhakha. Imbali Yokuphila ibuye itholakale ezindaweni eziningi emhlabeni jikelele ezifana neGibhithe, iTurkey, iGrisi, i-Ireland, iNgilandi, i-Israel, iNtaba iSinayi, iNdiya, iSpain kanye namathempeli amaningi IJapan neChina njll. Lokhu kuzo zonke izikhathi nakuwo wonke amasiko abavubukuli abathi babengaxhumananga ngqo, njengamaGibhithe asendulo kanye namaCelt enkathi ephakathi.
L"Flower of Life" ingatholakala kuzo zonke izinkolo ezinkulu zomhlaba. Iqukethe izinhlobo zokudalwa njengoba zivela "Okungenayo Okukhulu". Konke kudalwa ngokuvumelana nemicabango yoMdali. Emva kokudalwa kweMbewu yokuPhila ukunyakaza okufanayo kwe-vortex kwaqhutshwa, okwakhiwa isakhiwo esaziwayo njengeqanda lokuPhila. Lesi sakhiwo sakha isisekelo somculo, kanti ubude obuphakathi kwemikhakha bufana namabanga phakathi kwama-tones nama-semitones emculweni. Kufana nesakhiwo seselula sohlu lwesithathu lwe-embryonic (iseli lokuqala lihlukaniswe ngamaseli amabili, kanti lesine libe ngamaseli ayisishiyagalombili). Ngakho-ke isakhiwo esifanayo njengoba sikhula kancane, sidala umzimba womuntu nazo zonke izinhlelo zamandla zihlanganisa lezo ezisetshenziselwa ukwakha i-Merkabah. Uma siqhubeka nokudala izindawo eziningi futhi siphetha ngesakhiwo esibizwa ngokuthi uFleur de Vie
L"Flower of Life" ingatholakala kuzo zonke izinkolo ezinkulu zomhlaba. Iqukethe izinhlobo zokudalwa njengoba zivela "Okungenayo Okukhulu". Konke kudalwa ngokuvumelana nemicabango yoMdali. Emva kokudalwa kweMbewu yokuPhila ukunyakaza okufanayo kwe-vortex kwaqhutshwa, okwakhiwa isakhiwo esaziwayo njengeqanda lokuPhila. Lesi sakhiwo sakha isisekelo somculo, kanti ubude obuphakathi kwemikhakha bufana namabanga phakathi kwama-tones nama-semitones emculweni. Kufana nesakhiwo seselula sohlu lwesithathu lwe-embryonic (iseli lokuqala lihlukaniswe ngamaseli amabili, kanti lesine libe ngamaseli ayisishiyagalombili). Ngakho-ke isakhiwo esifanayo njengoba sikhula kancane, sidala umzimba womuntu nazo zonke izinhlelo zamandla zihlanganisa lezo ezisetshenziselwa ukwakha i-Merkabah. Uma siqhubeka nokudala izindawo eziningi futhi siphetha ngesakhiwo esibizwa ngokuthi uFleur de Vie.
LIthempeli lika-Osiris e-Abydos eGibhithe liqukethe isibonelo esidala kunazo zonke kuze kube manje. Yayiqoshwe ku-granite futhi ingase ibonise iso likaRa, uphawu lwegunya likaFaro. Ezinye izibonelo zingatholakala eFenike, e-Asiriya, e-Indiya, eMpumalanga Ephakathi nase-Medieval art.
LULeonardo da Vinci wafunda ukuma kwe-Flower of Life nezakhiwo zayo zezibalo. Wadonsa i-Flower of Life ngokwayo, kanye nezakhi ezifana neMbewu Yokuphila. Udwebe izibalo ze-geometri ezimelela ubujamo njengama-Solids e-Platonic 5, i-sphere, i-torus, njalonjalo. futhi wasebenzisa umthetho wegolide we-phi ebuciko bakhe; konke lokhu kungathathwa ku-Flower of Life.
Ce scheme of the Flower of Life uwukubonakaliswa ecacile lokuhlushwa wemithetho yemvelo kodwa futhi imithetho elifanayo ezintweni eziphilayo, futhi amaqembu amaningi, izinkolo, izikole esoteric, ama-oda izimfundiso ubheke lesi sici.
"Esikhathini Sokukhangisa: Konke okuphathelene nemizwelo."
LUmlayezo oqukethwe embali yokuphila kubaluleke kakhulu ukuthi ifihliwe ngamabomu ngezigidi zeminyakangisho noma wonke umuntu angathola ukumelela lapha noma lapho, ngokudweba, ukuqoshwa noma umhlobiso wokuhlobisa.
Dizingonyama zamatshe (Dragon / Dog Fu) ezesabekayo zihlelwe ngokwemvelo ngakwesinye isango lamakhosikazi noma amathempeli eChina lasendulo ukugcina umnyango. Ziyizivikeli ezingokomfanekiso zezimfihlakalo zasezulwini futhi ngaphansi kweyodwa yemilenze yabo yangaphambili ifakwe indawo lapho ngezinye izikhathi ibhalwe ngembali yokuphila. (Ividiyo-ngenhla) Ex: Isango Lomuzi Ovinjiwe waseBeijing).
DImiklamo eminingi yamaShayina noma amaTibetani, kanye nemidwebo yokufakwa kwesikhumba noma izikrini eziqoshiwe zezinkuni ziveza lo mdwebo.
Le ethempelini of Osiris at amakhilomitha 150 kusukela Luxor eGibhithe, uye amaphethini ulotshwe ezinye izinsika zalo emelela emibuthanweni amaqembu ahlanganiswa ndawonye futhi ngokuthi izimbali. Zakhiwa izingxenyana ezincane ze-19 noma ngaphezulu futhi zivame ukuzungezwe umbuthano ophindwe kabili.
Dumgijimi uMelchizedek unikeza imfundiso futhi udlulisela isemina emfihlilweni ye-Flower of Life * kanye nokuzindla emasimini amandla / ulwazi oluzungeze umzimba womuntu (obizwa ngokuthi i-Mer-Ka-Bah ematheksthini lasendulo). Ukhuluma ukuthi lo mbuthano ophindwe kabili ungase ube uphawu lwe-zona pelucida, igama lesiLatini lezingaphakathi zangaphakathi nangaphandle zangaphandle kweqanda labesifazane.
ON futhi uthola izikhombisi eziningi kulolu lwazi lwangaphambili lwe-Flower eTable Emerald Tables *" Ejulile enhliziyweni yomhlaba kungumthombo ovela kuMoya ohlanganisa yonke into ngendlela yayo. Ngokuba wazi ukuthi umhlaba uhlala emzimbeni wakhe njengoba uhlala ngendlela yakho. Imbali yokuphila injengomoya wakho futhi iphuma emhlabathini njengeyakho ngefomu lakho. "
Imbali yokuPhila njengoba igama layo lisikisela ekuzuzeni of Life. Ngamandla angokomfanekiso anamandla amakhulu ahlinzeka ngokuvikelwa, ukuthamba nokuzwana kwalabo abawugqokayo noma abawubukayo. Kusetshenziswa ukuthula, kwenkululeko ... Futhi-ke futhi, kokuphumelela ngokwezinto ezibonakalayo nangokomoya! Imbali Yokuphila iwuphawu olutholakala emhlabeni wonke. Noma ngabe ku Egypt njengaseYurophu, eKhathedrali noma emasontweni.
Imfihlo yasendulo ye-Life of Life, ivolumu 1
Okusha okungu-3 kusuka ku- € 23,23
Kusetshenziswe okungu-6 kusuka ku-17,90 €
Thenga i- € 23,23
Kugcine ukubuyekezwa ngoMashi 2, 2021 3:43 PM
isigaba ISAYENSI NEZIMPILO